ခန်ဓာကိုယျ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အိတျကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Fashion ခန်ဓာကိုယျ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အိတျကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
ခန်ဓာကိုယျ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အိတျကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
အိတျတှဟော အမြိုးသမီးတဈယောကျအတှကျ ဖကျရှငျလညျးကစြပွေီး မရှိမဖွဈ အရေးပါတဲ့ Accessories ပစ်စညျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျနျော။ ဒါပမေယျ့ လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျက ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံခငျြး မတူကွတာကွောငျ့ သူမြားနဲ့ကွညျ့ကောငျးနတေဲ့ အိတျက ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျခငျြမှ လိုကျဖကျတာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပြိုမရေဲ့ ကိုယျခန်ဓာအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ဘယျလိုအိတျလေးတှကေို ရှေးခယျြရမလဲဆိုတာ မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ ပထမဆုံး ပြိုမတေို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအမြိုးအစားနှငျ့ပတျသတျပွီး လလေ့ာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
တငျပါးထကျ ပခုံးတှကေ ပိုကယျြလြှငျ တွိဂံပွောငျးပွနျပုံသဏ်ဍာနျ ဖွဈပါတယျ။
ခါးနှငျ့ ပခုံးတှဟော တငျပါးထကျ ပိုကဉျြးတယျဆိုရငျ ပြိုမတေို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ သဈတျောသီးပုံ ဖွဈပါတယျ။
ပြိုမတေို့ရဲ့ ခါး၊ တငျပါးနှငျ့ ပခုံးအကယျြ အရှယျအစားတူပါက ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံ အမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။
ပြိုမတေို့ရဲ့ ခါးက ပခုံးနှငျ့ တငျပါးထကျ ပိုကွီးပါက ပနျးသီးပုံသဏ်ဍာနျ ဖွဈပါတယျ။
ခါးသှယျသှယျလေးရှိပွီး ပခုံးနှငျ့ တငျပါးအကယျြက တူညီတယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားမြှတတဲ့ သဲနာရီပုံစံ ဖွဈပါတယျ။
ပြိုမတေို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံကို ဒီနညျးလမျးဖွငျ့ ဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ။ ဖကျရှငျကြှမျးကငျြသူမြားက လကျကိုငျအိတျတဈခုကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ ပြိုမတေို့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျပုံစံ ဖွဈသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁။ တွိဂံပွောငျးပွနျပုံသဏ်ဍာနျ ရှိတယျဆိုလြှငျ
အောကျပိုငျးသေးတဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျ ဖွဈတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို balance ဖွဈစဖေို့ ခါးပတျလညျ ဧရိယာကို အာရုံစိုကျပါ။ သငျ့အတှကျ စဉျးစားရမယျ့အခကျြက ကွိုးအရှညျနှငျ့အကယျြဖွဈပါတယျ။ ကွိုးအပွားကွီးနှငျ့ အိုဗာဆိုဒျ ပခုံးလှယျအိတျတှေ (သို့) အရမျးသေးလှနျးတဲ့ အိတျတှေ မရှေးခယျြပါနဲ့။ စလှယျသိုငျးအိတျတှေ၊ ခါးပတျအိတျတှေ၊ ကွိုးရှညျရှညျနဲ့ လကျဆှဲအိတျတှေ၊ လကျပှအေိ့တျလေးတှကေို ရှေးခယျြကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၂။ ထောငျ့မှနျစတုဂံ ပုံသဏ်ဍာနျရှိပါက
လေးထောငျ့ဆနျတဲ့ ပြိုမတေို့ရဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကို ကောကျကွောငျးလေးတှထေညျ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဇိုငျးနှငျ့ လကျကိုငျအိတျရဲ့ materialက သငျ့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ ကွိုးရှညျရှညျနဲ့ စလငျးဘတျသေးသေးလေးတှေ ရှေးခယျြမယျ့အစား hobo အိတျလေးတှေ၊ ပစ်စညျးမြားမြားဆံ့တဲ့ tote bag အိတျလေးတှေ၊ ကွိုးအရှညျနဲ့ လှယျလို့လညျးရတဲ့ အိုဗာဆိုဒျ satchel လကျဆှဲအိတျလေးတှေ နှငျ့ ပြော့ပြောငျးတဲ့ သားရအေိတျတှကေို ရှေးခယျြပါ။
၃။ သဈတျောသီး ပုံသဏ်ဍာနျရှိပါက
ခါးအောကျပိုငျးကို ပိုထှားတဲ့ပုံ မဖွဈခငျြရငျ ပြိုမတေို့ရဲ့ ပခုံးနှငျ့ ရငျဘကျတဈဝိုကျကို focus ထားပါ။ အိတျရဲ့ ကွိုးအရှညျကို သတိပွုဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သငျ့လကျကိုငျအိတျဟာ သငျ့ခါးလိုငျးအောကျ ကမြနသေငျ့ပါဘူး။ ပခုံးလှယျတဲ့ အိတျတှေ၊ bucket အိတျတှကေို ရှေးခယျြပါ။ ခါးပတျအိတျကို နှဈသကျပါက စလှယျသိုငျးအိတျမြိုးကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
၄။ ပနျးသီး ပုံသဏ်ဍာနျရှိပါက
ပြိုမတေို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကောကျကွောငျးကို ဟနျခကျြညီစဖေို့ ထငျယောငျထငျမှား ပုံသဏ်ဍာနျကို ဖနျတီးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ရှေးခယျြတဲ့ လကျကိုငျအိတျရဲ့ အရှယျအစားနှငျ့ ဒီဇိုငျးက လုံးဝကှဲပွားရပါမယျ။ ကွိုးတိုတိုနဲ့ အိတျတှေ၊ အိတျသေးသေးလေးတှကေိုရှောငျပါ။
အဲ့ဒီအစား လယျသာအမာနဲ့ tote bagလေးတှေ၊ top handle လကျကိုငျအိတျလေးတှကေ ပြိုမတေို့အတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။
၅။ သဲနာရီ ပုံသဏ်ဍာနျဆိုရငျ
ဒီခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားရှိတဲ့သူဟာ ကံကောငျးတဲ့သူပါ။ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ လကျကိုငျအိတျ ရှေးခယျြမှုအကွားမှာ အတားအဆီးတဈခုမရှိစဖေို့ သငျ့ရဲ့ ဟနျခကျြညီတဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကို မဖုံးကှယျထားတဲ့ အိတျလေးတှကေို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
ခန္ဓာကိုယ် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အိတ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
အိတ်တွေဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဖက်ရှင်လည်းကျစေပြီး မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ Accessories ပစ္စည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချင်း မတူကြတာကြောင့် သူများနဲ့ကြည့်ကောင်းနေတဲ့ အိတ်က ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ချင်မှ လိုက်ဖက်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပျိုမေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအိတ်လေးတွေကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ပျိုမေတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တင်ပါးထက် ပခုံးတွေက ပိုကျယ်လျှင် တြိဂံပြောင်းပြန်ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးနှင့် ပခုံးတွေဟာ တင်ပါးထက် ပိုကျဉ်းတယ်ဆိုရင် ပျိုမေတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သစ်တော်သီးပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျိုမေတို့ရဲ့ ခါး၊ တင်ပါးနှင့် ပခုံးအကျယ် အရွယ်အစားတူပါက ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
ပျိုမေတို့ရဲ့ ခါးက ပခုံးနှင့် တင်ပါးထက် ပိုကြီးပါက ပန်းသီးပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးသွယ်သွယ်လေးရှိပြီး ပခုံးနှင့် တင်ပါးအကျယ်က တူညီတယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမျှတတဲ့ သဲနာရီပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျိုမေတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ဒီနည်းလမ်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူများက လက်ကိုင်အိတ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ပျိုမေတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁။ တြိဂံပြောင်းပြန်ပုံသဏ္ဍာန် ရှိတယ်ဆိုလျှင်
အောက်ပိုင်းသေးတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို balance ဖြစ်စေဖို့ ခါးပတ်လည် ဧရိယာကို အာရုံစိုက်ပါ။ သင့်အတွက် စဉ်းစားရမယ့်အချက်က ကြိုးအရှည်နှင့်အကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးအပြားကြီးနှင့် အိုဗာဆိုဒ် ပခုံးလွယ်အိတ်တွေ (သို့) အရမ်းသေးလွန်းတဲ့ အိတ်တွေ မရွေးချယ်ပါနဲ့။ စလွယ်သိုင်းအိတ်တွေ၊ ခါးပတ်အိတ်တွေ၊ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လက်ဆွဲအိတ်တွေ၊ လက်ပွေ့အိတ်လေးတွေကို ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါက
လေးထောင့်ဆန်တဲ့ ပျိုမေတို့ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကောက်ကြောင်းလေးတွေထည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဇိုင်းနှင့် လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ materialက သင့်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ စလင်းဘတ်သေးသေးလေးတွေ ရွေးချယ်မယ့်အစား hobo အိတ်လေးတွေ၊ ပစ္စည်းများများဆံ့တဲ့ tote bag အိတ်လေးတွေ၊ ကြိုးအရှည်နဲ့ လွယ်လို့လည်းရတဲ့ အိုဗာဆိုဒ် satchel လက်ဆွဲအိတ်လေးတွေ နှင့် ပျော့ပျောင်းတဲ့ သားရေအိတ်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ သစ်တော်သီး ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါက
ခါးအောက်ပိုင်းကို ပိုထွားတဲ့ပုံ မဖြစ်ချင်ရင် ပျိုမေတို့ရဲ့ ပခုံးနှင့် ရင်ဘက်တစ်ဝိုက်ကို focus ထားပါ။ အိတ်ရဲ့ ကြိုးအရှည်ကို သတိပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ဟာ သင့်ခါးလိုင်းအောက် ကျမနေသင့်ပါဘူး။ ပခုံးလွယ်တဲ့ အိတ်တွေ၊ bucket အိတ်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ ခါးပတ်အိတ်ကို နှစ်သက်ပါက စလွယ်သိုင်းအိတ်မျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၄။ ပန်းသီး ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါက
ပျိုမေတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကောက်ကြောင်းကို ဟန်ချက်ညီစေဖို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ အရွယ်အစားနှင့် ဒီဇိုင်းက လုံးဝကွဲပြားရပါမယ်။ ကြိုးတိုတိုနဲ့ အိတ်တွေ၊ အိတ်သေးသေးလေးတွေကိုရှောင်ပါ။
အဲ့ဒီအစား လယ်သာအမာနဲ့ tote bagလေးတွေ၊ top handle လက်ကိုင်အိတ်လေးတွေက ပျိုမေတို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
၅။ သဲနာရီ ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရင်
ဒီခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားရှိတဲ့သူဟာ ကံကောင်းတဲ့သူပါ။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လက်ကိုင်အိတ် ရွေးချယ်မှုအကြားမှာ အတားအဆီးတစ်ခုမရှိစေဖို့ သင့်ရဲ့ ဟန်ချက်ညီတဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို မဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အိတ်လေးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Previous articleကစားစရာတှမှော စှဲကပျနနေိုငျတဲ့ မှိုကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ဒုက်ခမရောကျစဖေို့
Next articleကလေးတှနေဲ့အတူ ခရီးထှကျတဲ့အခါ မိဘတှပွေုလုပျတတျတဲ့ အမှားမြား
သငျ့ရဲ့နောကျကြောကို မထိခိုကျစတေဲ့ အိတျတဈလုံးကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
အငျတာဗြူးသှားဖွတေဲ့အခါ အလုပျရနိုငျခွမြေားတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှု သိကောငျးစရာ (၅)ခု
လုပျငနျးခှငျမှာ သငျ့တျောတဲ့ အဝတျအစားကို ဝတျဆငျတာက ဘာတှအေကြိုးထူးစလောနိုငျမလဲ